Yaraanta Chip Baradhada ayaa ka qoto dheer intaad u malaynayso: Waa kuwan wax walba oo aad u baahan tahay inaad ogaato - 【Is barbardhiga】 2022
Yaraanta jajabka baradhada ayaa ka qoto dheer sidaad u malaynayso - waa kuwan wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato
Chips Silicon shaki la'aan waa qayb ka mid ah mishiinada aduunka ka dhigaya mid wareeg ah, laakiin sanadka 2020 arrimo isku dhafan ayaa dhibaato geliyey dhammaan warshadaha chips.
Iyada oo Covid-19 uu kor u qaadayo madaxiisa foosha xun iyo burburinta, adduunka intiisa badan ayaa albaabbada u laabay, laakiin coronavirus ma aha sababta kaliya ee dhibaatooyinka soo raacay.
Qorshayn xumo ayaa ahayd arrin weyn, sidoo kale tartanka u dhexeeya warshado gaar ah si ay u helaan dareenka chipmakers, iyo xitaa masiibooyinka dabiiciga ah ayaa lahaa door in ay ciyaaraan; Marka la soo koobo, yaraanta chip-ka caalamiga ah ayaa xitaa aad uga adag inta aad malaynayso.
1 Qodobbada asaasiga ah
2 Waa maxay arrimaha kale ee ka qaybqaatay yaraanta chip-ka caalamiga ah?
3 Waa maxay qaybaha ugu badan ee ay saameeyeen?
4 Saamaynta qiimaha
5 Black Friday iyo Christmas
6 Waa maxay alaabooyinka kale ee saameeya?
Qodobbada asaasiga ah
Dib u milicsiga, suurtagal maaha in la tilmaamo hal ama laba sababood oo yaraanta chip-ka, maadaama ay ahayd dabaylo dhibaatooyin ah oo dhacay waqti khaldan.
Laakiin bilawga, waxaa jiray la'aanta dhiirigelinta kuwa sameeya silikoon si ay u dhisaan aasaas ku filan si ay u qanciyaan baabuurta iyo kuwa kale, ayuu yidhi Mario Morales, madaxweyne ku xigeenka barnaamijka kooxda semiconductor ee shirkadda, shirkad falanqeeye IDC. Morales waxa uu sheegay in qofna aanu maalgelinayn "teknoolajiyada dhaxalgalka ah" taas oo, in kasta oo ay duugowday, haddana door muhiim ah ka ciyaartaa warshado badan.
Intii lagu jiray masiibada, soosaarayaasha qalabka asalka ah ee warshadaha baabuurta (OEMs) "waxay baabi'iyeen amarada inta badan silsiladda saadka," ayuu yidhi. "Alaab-qeybiyeyaal badan oo niyad-jabsan ayaa helay suuqyo kale oo weli si wanaagsan u shaqeynaya in kasta oo aafada. "
Laakiin dhibaatooyinka waa la sii raadin karaa. Deyrtii 2018, tusaale ahaan, Mareykanka ayaa cunaqabateyn ganacsi ku soo rogay Shiinaha. Tani waxay ku kaliftay Huawei, oo ah mid ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn Shiinaha, inuu soo rogo dalabyo waaweyn oo ku saabsan chips ka hor inta aan la dhaqan gelin cunaqabataynta. Tufaax iyo kuwa kaleba way raaceen si ay u dadaalaan inaan laga tagin, ka dib masiibada ayaa bilaabatay.
(Sawirka credit: andriano.cz / Shutterstock)
La yaab ma leh, shilalka masiibada ahi waxay door ku yeesheen yaraanta silikoon, laakiin waxay sidoo kale saameeyeen aagagga kale. Ku dhawaad ​​wax kasta oo batari haysta ama gidaarka ku xidha waxay adeegsadaan tignoolajiyada chip-ku-salaysan.
Tusaale ahaan, baahida loo qabo adeegyada xisaabinta daruuraha ayaa qaraxday iyadoo macaamiil badan ay bilaabeen inay iibsadaan alaab aysan caadi ahaan u baahnayn inay ka shaqeeyaan guriga, iyo ganacsiyo badan.
Taleefannada casriga ah ayaa weli ah wax soo saarka elektaroonigga ah ee ugu caansan adduunka, sidaas darteed dalabaadka ayaa weli ah mid sarreeya waxaana dadka xiiseeya crypto iyo ganacsatadu ay la wareegeen unugyada farsamaynta sawirada (GPUs).
Waa maxay arrimaha kale ee ka qaybqaatay yaraanta chip-ka caalamiga ah?
Dhowr arrimood oo kale oo hoose ayaa sidoo kale gacan ka geystay yaraanta chips, iyo kakanaanta waxyaabaha sida semiconductors sidoo kale waa arrin weyn.
Sida laga soo xigtay Craig Barrett, madaxii hore ee Intel, Microprocessors-ka shirkaddu waa aaladaha ugu dhibka badan ee abid ay dadku sameeyaan. Nidaamku aad ayuu u jilicsan yahay oo qolalka lagu dhisay semiconductors ayaa ka nadiifsan qolalka qalliinka ee isbitaalka. Qolka qalliinka, waxay ogolaadaan 10.000 hawo wasakhaysan halkii mitir kuyuub oo hawo ah. Qolka lagu dhisayo semiconductor, kaliya waxay ogolaadaan 10 mitir kuyuubik kasta.
Markaa samaynta chips silikoon ma fududa, laakiin dadka sameeya waa kuwo karti leh oo ay taageeraan kheyraad badan. Haddaba waa maxay dhibaatada dhabta ah?
In warshad chip Intel ah. (Sawirka: Intel)
Haddii ay fududahay ama ay adag tahay in la dhiso semiconductor, ujeedadu waa in geeddi-socodku yahay balaayiin doollar iyo waqti. Oo haddii aad kharribto nidaamka hal xoogaa, fursadaha waa inaad lumin doontaa soo saaraha kale.
Waxay qaadataa ilaa saddex bilood in la sameeyo chip laga bilaabo bilaw ilaa dhamaad waxayna ku lug leedahay mashiinada malaayiin doolar ah. Waxa kale oo jira bir dhalaalaysa iyo lasers oo ku lug leh marka ay qaadanayso maraqa silikoon oo ay u beddesho transistor si ay ugu kordhiso kombiyuutarkaaga, casrigaaga, ama qalabka kale ee casriga ah.
Ugu dambeyntii, dhowr arrimood oo ka baxsan xakamaynta warshadaha semiconductor ayaa sidoo kale door ka ciyaaray. Korontada oo ka go'day Texas, halkaasoo inta badan wax soo saarka chips ay ka dhacdo Mareykanka, iyo abaarta ka jirta Taiwan, ayaa sidoo kale gacan ka geysatay yaraanta.
Chipmaker-ka adduunka ugu weyn, TSMC, ayaa sidoo kale ku qasbanaaday inuu yareeyo isticmaalka biyaha (muhiim u ah soosaarka chips) sababo la xiriira amarada dowladda. Taiwan waxay ka dhigan tahay in ka badan 60% wadarta guud ee dakhliga ka soo xarooda chip foundry adduunka oo dhan, waddankuna wuu awoodi waayay inuu sii wado wax soo saarkiisa caadiga ah.
Waa maxay qaybaha ugu badan ee ay saameeyeen?
Baabuur-sameeyayaasha waxa ay ahaayeen kuwo curyaan ah in ka badan hal sano xaaladduna way ka sii dari kartaa. Faafida cusub ee loo yaqaan 'Covid-ka' ee Koonfur-bari Aasiya, halkaas oo inta badan gawaarida gawaarida Mareykanka laga sameeyo, waxay sii saameyn kartaa warshadaha sanadka soo socda.
Wax soo saarka dalal ay ka mid yihiin Vietnam, Filibiin iyo Malaysiya ayaa la hakiyay cudurka dillaacay dartiis, laakiin shirkadaha baabuurta sameeya ee Mareykanka ayaa si weyn ugu tiirsan waddamadan si ay u sii wadaan khadadka wax soo saarkooda inay socdaan maadaama warshadaha maxalliga ah aysan xisaabin 12,5% ​​wax soo saarka chips.
Warshadaha kale ee dhibban waa soo saarista qalabka elektarooniga ah ee macaamiisha. Tusaale ahaan, Hon Hai Precision Industry, oo ah alaab-qeybiyaha Apple, ayaa sheegay in qiyaastii 10% shixnadeeda ay saameyn doonto. Xiaomi, ayaa dhanka kale, sheegtay in taleefannadeeda casriga ah ay la kulmi doonaan qiimo koror sababtoo ah gabaabsi caalami ah.
Badeecadaha Apple ee MacBookga iyo iPad-ka ayaa sidoo kale la kulmay dhibaatooyin wax soo saar, waxaana bishii Maarso Samsung ay ku dhawaaqday in Galaxy Note-keeda cusub uu dib u dhacayo muddo aan xad lahayn.
Xogtii u dambaysay ayaa muujinaysa in iibka talefannada casriga ah uu hoos u dhacay 6% sannad kasta, taasina waa sababta oo ah wax-soo-saarkii ayaa istaagay, xaaladaha qaarkoodna, joogsaday. Intaa waxaa dheer, Chipmakers ayaa kor u qaadaya qiimaha si ay uga fogaadaan sahayda xad dhaafka ah, waxaana la arki doonaa haddii ay taasi saameyn ku yeelan doonto qiimaha taleefannada casriga ah sanadka soo socda.
Sameeyayaasha taleefannada casriga ah sida Samsung iyo Apple ayaa iska fogeeyay rasaastii ugu horreysay ee yaraanta microchip-ka, iyagoo arkay waxa dhacaya waqti dheer ka hor warshadaha baabuurta, in kasta oo ay jiraan dhibaatooyin weli.
Si kastaba ha ahaatee, warshadaha baabuurta iyo kuwa kale ayaa la qabsanaya. Syed Alem, oo ah agaasimaha caalamiga ah ee Accenture ee semiconductors, ayaa yiri: "Shirkadaha taleefannada casriga ah waxay ka faa'iideysteen awoodda dheeriga ah ee ay ka tageen shirkadaha baabuurta, taasoo keentay in warshadaha baabuurta ay la kulmaan yaraanta jajab marka baahida baabuurta ay u korodhay si ka dhaqso badan sidii la filayay. "
"Hadda oo warshadaha baabuurta iyo kuwa kale ay soo qabtaan oo ay bilaabaan inay dib u helaan awooddii ay ka tageen, tartanka saadka semiconductor waa mid daran. Tani waxay abuurtay cadaadis sahayda chips-yada casriga ah.
Sababo la xiriira baahida cakiran iyo hagaajinta rajada macaamiisha, rubuci hore ee 2021 wuxuu arkay iibka taleefannada casriga ah ee adduunka oo kordhay 26%. Si kastaba ha ahaatee, chipmakers ma sii wadi karaan baahida taasina uma badna inay isbedelaan dhamaadka sanadka.
Iyada oo ay weheliso korodhka suurtagalka ah ee qiimaha taleefannada casriga ah, alaabooyin kale oo dhowr ah ayaa aad u qaali ah sababtoo ah yaraanta.
Qiimaha GPU iyo CPU ayaa cirka isku shareeray tan iyo bilawgii gabaabsigii caalamiga ahaa, iyadoo kan dambe uu gaaray 50% in ka badan MSRP suuqyada badi, sida ay qabaan khubarada qaar.
Intii u dhaxaysay Maarso iyo Maajo 2021 oo keliya, qiimaha GPU-yada ayaa kordhay 14%, iyadoo Nvidia's RTX 3060 iyo RTX 3080 GPUs lagu iibiyay afar jeer MSRP-gooda iyo RX 6700 XT ama RX 6900 XTs laba jeer MSRP.
Saddex arrimood oo waaweyn ayaa ka qayb qaatay kor u kaca qiimaha GPU iyo CPU: iibiyeyaasha, arrimaha silsilada saadka, iyo iibiyeyaasha adag.
Waxaan daboolnay kororka qiimaha horay, laakiin soosaarayaal badan, waxaa jirta sabab kale oo sidaas loo sameeyo: Waxay rabaan inay ka hortagaan iibiyeyaasha inay ka iibsadaan GPU-yada MSRP ka dibna ay wiiqaan suuqa.
In kasta oo ayan koontaroolin qiimaha CPU-yada iyo GPU-yada, qaybiyayaashu in ka badan ama ka yar waxay ku qasbaan tafaariiqda inay iibsadaan qaybo alaab ah. Si fudud loo dhigo, waxay u sheegaan tafaariiqda in processor gaar ah ama GPU la heli karo oo keliya haddii ay ku iibsadaan X, Y, iyo Z. Dhanka kale, tafaariiqleyaasha ayaa kor u qaadaya qiimaha GPU ama CPU si ay u magdhabaan alaabada dheeriga ah ee ay ku bixinayeen kaliya si ay u helaan GPU / CPU ay u baahan yihiin. Ama waxaad arki doontaa tafaariiqleyaasha oo isku dayaya inay iibiyaan baakadaha marka macaamiishu aysan u baahnayn wax la mid ah - saameyn hoos u dhac ah oo aan caawinaynin xaaladda yaraanta chip hadda.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira wax ka badan. Dhirta wax-soo-saarka (fabs) waxay leeyihiin tiro xaddidan oo jajab ah oo ay soo saari karaan oo ay keeni karaan. Samsung iyo Taiwan Semiconductor Production Company (TSMC), kuwaas oo siiya Nvidia iyo Advanced Micro Devices (AMD) siday u kala horreeyaan, ma awoodaan inay soo saaraan GPU-yada. Intaa waxaa dheer, waxaa jira dhibaatooyin joogto ah oo ku saabsan substrates, alaabta ceeriin, xusuusta GDDR, iyo qaybaha. Tani sidoo kale waa sababta qiimaha GPU-yada uu u kordhay si aad ah marka loo eego kan CPU-yada.
Black Friday iyo Christmas
Fasaxyadu aad bay u soo dhow yihiin, yaraanta boodada ee adduunka ayaa door ka qaadan doonta. Si sax ah uma saadaalin kartid waxa ku dhici doona alaabtaada Jimcaha Madow, laakiin waxaa jira xeelado aad raaci karto si aad u yareyso arrimaha.
Maadaama Covid-19 uu wali ku badan yahay Koonfur-bari Aasiya, halkaas oo alaabooyin badan laga sameeyo, waxaad filan kartaa in khaanadaha ay faaruqi doonaan marka loo eego sannadihii hore. Waxa kale oo aad filan kartaa in qiimuhu kor u kaco wax kasta oo ay ugu wacan tahay shaqo la'aan, sahay yari, iyo wakhtiyada maraakiibta oo dheer.
Falanqeeyayaasha ayaa sidoo kale saadaaliyay in qiimaha baayacmushtarku uu sii wadi doono kor u kaca ilaa dhamaadka 2021, iyo iibinta Jimcaha Madoow ee caadiga ah iyo dalacsiinta ay hoos u dhici doonaan tafaariiqlayaal badan.
Kirismaska ​​waxay u badan tahay inay sidoo kale saameyn doonto, maadaama tafaariiqda ay la kulmaan dhibaatooyin ay ku kaydiyaan khaanadaha alaabta carruurtu ku ciyaarto, gaar ahaan kuwa leh microchips. Sida laga soo xigtay maamulaha Sky Castle Toys Lev Nelson, marka lagu daro gabaabsiga laftiisa, kuwa sameeya alaabada ay ku ciyaaraan waxaa badanaa lagu riixaa xagga dambe ee khadka semiconductor-ka alaabada sare sida baabuurta, taleefannada casriga ah, iyo mashiinka dharka lagu dhaqo.
Si aad isaga ilaaliso in aad la kulanto qiimaha korodhka Jimcaha Madoow iyo Kirismaska, waa in aad hadda bilowdaa wax iibsiga. Sida ugu dhakhsaha badan ayaa u roon, gaar ahaan wax kasta oo isticmaala chip silikon.
Waa maxay alaabooyinka kale ee saameeya?
Sida laga soo xigtay Goldman Sachs, yaraanta chip-ka adduunka ayaa saamaysay 169 warshadood oo kala duwan. Warshad kasta oo ku kharash garaysa ugu yaraan 1% GDP-geeda chips-ka semiconductor waa la saameeyaa, oo leh baabuurku ...